जब पाइलटले एयर होस्टेसलाइ कपडा खोलेर आफ्नो …. देखाउन थाले – Sapana Sanjal
जब पाइलटले एयर होस्टेसलाइ कपडा खोलेर आफ्नो …. देखाउन थाले
May 30, 2021 137
एक अमेरिकी वायुसेवाका भूतपूर्व विमान चालकले गत वर्ष उडानमा रहँदा ‘अ श्ली ल र अ भ द्र का र्य ग रे को अदालतसामु स्वीकारेका छन्। माइकल हाकले विमानकी सहचालिकाको अगाडि ककपिटमै लुगा खोलेको र ल्यापटपमा अ श्ली ल चलचित्र हेरेको अभियोजनकर्ताहरूले आरोप लगाएका थिए। साउथवेस्ट वायुसेवाको उडान जारी रहँदा ६० वर्षीय हाकले ककपिटमा थप यस्तो गरेको बताइएको छ।
मेरिल्यान्डमा एक न्यायाधीशले हाकलाई ५,००० अमेरिकी डलर जरिबाना गर्नुका साथै एक वर्ष परीक्षणकालमा राख्न आदेश दिएका छन्। सो घटना सन् २०२० अगस्ट २० को दिन फिलाडेल्फीयादेखि ओर्ल्यान्डोसम्मको उडानमा भएको अदालतलाई बताइएको छ। विमान सुरक्षित उचाइमा पुगेपछि हाक आफ्नो कुर्सीबाट उठेको, जानाजान लुगा खोलेको र ल्यापटपमा अ ‘श्ली’ल चित्र र चलचित्र हेर्न थालेको बताइएको छ।
“विमानकी सहचालिकाले आफ्नो काम गरिरहँदा हाक भने अझै थप अभद्र व्यवहार देखाइरहेका थिए,” सरकारी वकिलको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। उनीहरूका अनुसार हाकले उडानअघि कहिल्यै ती सहचालिकालाई भेटेका थिएनन्। अमेरिकाका सहमहकन्यायाधिवक्ता माइकल कनिङ्घमले सहचालिकाले त्यस्तो व्यवहार भोग्नु नपर्ने अधिकार रहेको बताएको एपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।
सो घटना हुँदा विमान मेरिल्यान्डमाथि उडिरहेकोले त्यहाँ मुद्दा चलाइएको हो। हाकले सार्वजनिक स्थलमा अश्लील र अभद्र व्यवहार देखाएको स्वीकार गरेका छन्। एउटा भिडिओमा उनले आफ्नो व्यवहारप्रति माफी माग्दै सो कार्य आफू र सहचालिकाबीच जिस्कँदा भएको र यसको यस्तो नतिजा होला भनेर कहिल्यै नसोचेको दाबी गरेका छन्।
न्यायाधीश जे मार्क कल्सनले हाकले त्यस्तो व्यवहारले सहचालिकालाई आघात पारेको र त्यसले यात्रुहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने बताएका थिए। फ्लोरिडाका हाक २७ वर्ष सो वायुसेवामा विमान चालक रहेर गत वर्ष अगस्टमा सेवा निवृत्त भएका थिए। एक विज्ञप्तिमा वायुसेवाले त्यस्तो व्यवहारलाई नसहेको बताएको छ। एक प्रवक्ताले हाक सेवा निवृत्त भएपछि सो घटनाको जानकारी पाएको बताएका छन्। त्यसपछि हाकलाई सेवा निवृत्त भएपश्चात् प्राप्त हुने सुविधा रोकिदिएको वायुसेवाले बताएको छ।
Prevआमाको कोभिड नतिजा नेगेटिभ, नवजात शिशुको पोजेटिभ भएपछि डाक्टर पनि अचम्मित
Nextश्रीमतीलाई कोरना लागेपछि श्रीमान छोडेर फरार भए, घरबेटीले घर बाट निकालिदिए, वडाध्यक्षको यस्तो सहयोग (भिडियो सहित)
श्रीमतीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न श्रीमान ६ घण्टा खाटमुनी लुकेका थिए, जब यस्तो दृष्य देखे भयो नसोचेको घटना
साइकल मन्त्री’ लालबाबुको काठमाण्डौ र विराटनगरमा घरजग्गा, आखिर कसरी भयो श्रीमतीकै नाममा यति धेरै सम्पत्ति ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको चौतर्फी आलोचना, कुन नेताले के भने ?
एसईईको मूल्यांकन गत वर्ष भन्दा फरक हुने, नयाँ कार्यविधि बनाइँदैv
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (723)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (663)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (633)
प्रियंका कार्की गर्भवती हुँदा श्रीमान आयुष्मानले बनाएको भिडियो एकैदिनमा ५ लाख बढीले हेरे , हेर्नुहोस भिडियो – (630)
ललितपुरबाट पोखरा बोलाएर नुभिवलाइ आफ्नै साथीले…. (628)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ ! (621)
हड्डि र छाला मात्रै बाकि छ ,यी १४ बर्षिय बाबुलाई यो के भयो यस्तो ,कठै (हेर्नुस् भिडियो ) (594)
हार्दिक बधाई ! रेखा थापाले समाजसेवी केटासँग लगनगाठोँ कस्दैँछिन् ? (573)
यी महान श्रीमान जसले आफ्नो श्रीमतीको खुसि फर्काएरै छाडे – विनोद र अनिता खड्काको वैवाहिक वर्षगाँठ सबैको मायाले मृत्युको मुखबाट फर्किएकी अनिताले आफैं काटिन केक फर्कियो खुशी (भिडियो) (538)
आँफुभन्दा धेरै वर्ष कान्छा युवकसँग विबाह गरेकी नायिका श्वेता खड्का किन रुदै आइन मिडियामा। भिडियो सहित (514)
बेलायतमा भेटियो अर्को नयाँ भाइरस, के हो मन्कीपक्स ? यो कति खतरनाक छ ?
रातारात चमत्कार ! धन प्राप्तिका लागि सुत्नुअघि राख्नुहोस् सिरानीमुनी यी ५ चिज! ॐ लेखी तुरुन्तै हेर्नुहोस
काे-राेना ठीक भएपछि पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिइएन भने ज्या`नेै जान सक्छ !
बिहे गरेको २ बर्ष पछी दलित भन्दै श्रीमानले या तना दिएकी श्रीमती भन्छिन : ‘ मेरो शरीर संग खेल्न मात्र बिहे गरेको रहेछ ‘ हेर्नुहोस
घरमै बनाउनुहाेस् खाउँ खाउँ लाग्ने स्वादिलो आँपको अचार,यस्ताे छ बनाउने तरिका (विधि सहित)